काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाका तल्लो दर्जाको हकमा निवृतिभरण अवधि पुनरावलोकन गर्न (१६ बर्षे कायम गर्न) माग गर्दै रक्षामन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् ।
रक्षा सचिवलाई सम्बोधन गर्दै सेनापती थापाले निवृतिभरण अवधि पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धको आशय पत्र पठाएका हुन् ।
सेनापती थापाले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाको सांगठानिक संरचना र व्यवस्थापनलाई सन्तुलित र थप प्रभावकारी बनाउन सेनाको कामको प्रकृति र मुलुकको भौगोलिक बनोटले गर्दा बढी शारीरिक तन्दुरुस्ती चाहिने हुँदा युवा जनशक्ति पुर्ताल गर्न निवृतिभरण अवधि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ,’।
सैनिक नियममावली २०६९ अनुसार २०६० वैशाखपछि भर्ना भएका सकलदर्जाहरुको निवृतिभरण अवधि २० वर्ष मानिएकोमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आशयको परिपत्र प्रधानसेनपतिले गरेका हुन् ।
यहि साउनको ५ गते पठाइएको उक्त पत्रको चलानी नं ४००९ रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीका जवानको उस्तै माग !
प्रहरी जवानले र हवल्दारले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाएर सबैले २० वर्षमा पेन्सन पाउने नियम सरकारले लागू गरेपछि तल्लो दर्जामा काम गर्ने प्रहरी तर्फ अहिले व्यापक असन्तुष्टि छ । एक जना प्रहरी जवान दिपेन्द्र चन्दले नेपाल सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदननै दायर गरेका छन् ।
उनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा निम्न दर्जाका कर्मचारीले १६ बर्षमा स्वेच्छिक अवकास रोज्न पाउँनुपर्ने माग छ । प्रहरी तर्फ पनि १६ बर्षे कायम रहनुपर्ने माग आइरहेकै बेला नेपाली सेनाका सेनापतिको यस्तो परिपत्र सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधान सेनापतिको यस्तो पत्रको माग जायज भएको भन्दै सामाजिक संजालमा निम्न दर्जाका सुरक्षाकर्मीले सेनापति थापाको प्रशंसा गरिरहेका छन् । नेपाली सेनाले निम्न दर्जाका सिपाहीका लागि गरेको यस्तो परिपत्रले नेपाल प्रहरी तर्फ पनि दबाब बढ्न सक्ने ठानिएको छ । तर, नेपाली सेनाको उक्त पत्रको माग सम्बोधनका लागि रक्षामन्त्रालय कति तयार हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकि छ !
प्रहरी जवान चन्दले पेन्सन सम्बन्धी हालेको उक्त मुद्दामा आगामी साउन १९ गते सर्वोच्चको पेशीमा फैसला हुने सम्भावना छ ।
जवान चन्दले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उठाएको माग गलत छ भनी तत्कालिन प्रहरीका आईजिपी प्रकाश अर्यालले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका छन् । प्रहरी तर्फ हाल सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्व छ । यसबारे खनालले धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।
के छ यसअघिका आईजिपी अर्यालले १६ बर्षे पेन्सनबारे सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा ? तल हेर्नुहोस्
चन्दले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको पेन्सन सम्बन्धी रिट यस्तो छ ।